Resin Cation siri ike
Resins Nhazi matriks nke Polymer Kpọọ Ọkụ ỌrụOtu Ionic Ụdị Mkpokọta Mgbanwe Ike (meq/ml na Na+ ) Ọdịnaya Mmiri dị ka Na+ Akụkụ urughuru mm ỌzịzaH → Na Max. Mbupu ibu g/l
GC104 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 1.50 56-62% 0.3-1.2
GC107 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
GC107B Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 1.90 45-50% 0.3-1.2
GC108 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.00 45-59% 0.3-1.2
GC109 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.10 40-45% 0.3-1.2
GC110 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.20 38-43% 0.3-1.2
GC116 Gel Poly-styrene nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.40 38-38% 0.3-1.2
MC001 Poly-styrene macroporous nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
MC002 Poly-styrene macroporous nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.00 45-50% 0.3-1.2
MC003 Poly-styrene macroporous nwere DVB 95% R-SO3 Na+/H+ 2.30 40-45% 0.3-1.2
Acid siri ike
Resin mgbanwe acid siri ike bụ ụdị resin mgbanwe cation nwere otu sulfonic acid (- SO3H) dị ka otu mgbanwe mgbanwe, nke enwere ike ijigharị ọzọ.
Ojiji nke mineral mineral nkịtị bụ otu. Ụdị resin mmiri dị nro bụ resin mgbanwe acid ion siri ike. A ga -eji ụdị resin ụdị ihe mkpali pụrụ iche, n'ihi na ọ na -emetụtakwa mmetụta nke mwepụta ion hydrogen, nha pore na ogo njikọ n'etiti mmeghachi omume.
Na ngwa ụlọ ọrụ, uru nke resin mgbanwe ion bụ ikike ịgwọ ọrịa buru ibu, oke decolorization sara mbara, ikike ịcha akwa dị elu, iwepụ ion dị iche iche, mmụba ugboro ugboro, ndụ ogologo oge na ọnụ ahịa ọrụ dị ala (ọ bụ ezie na ọnụ ahịa otu oge itinye ego buru ibu) . Teknụzụ ọhụrụ dị iche iche dabere na resin mgbanwe ion, dị ka nkewa chromatographic, mwepu ion, electrodialysis, wdg, nwere ọrụ pụrụ iche nke ha ma nwee ike rụọ ọrụ pụrụ iche dị iche iche, nke siri ike ịme site na ụzọ ndị ọzọ. Mmepe na itinye teknụzụ mgbanwe ion ka na -eto n'ike n'ike.
1. resin mgbanwe ion nwere mmiri ụfọdụ ekwesighi ịchekwa ya na mbara ikuku. N'oge nchekwa na njem, ekwesịrị idebe ya mmiri ka ọ ghara ihicha nkụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na -ebute resin gbajiri agbaji. Ọ bụrụ na resin na -agwụ mmiri n'oge nchekwa, ekwesịrị itinye ya na mmiri nnu (10%) wee jiri nwayọ gwakọta ya. Ekwesighi itinye ya n'ime mmiri ozugbo ka ọ ghara ịgbasa ngwa ngwa na mgbaji resin.
2. N'oge nchekwa na njem n'oge oyi, ekwesịrị idobe ọnọdụ okpomọkụ na 5-40 ℃ iji zere ịkasị oke ma ọ bụ ikpo oke ọkụ, nke ga-emetụta ogo ya. Ọ bụrụ na enweghị ngwa mkpuchi ọkụ n'oge oyi, enwere ike ịchekwa resin na mmiri nnu, a ga -ekpebi mkpokọta mmiri nnu dị ka ọnọdụ okpomọkụ si dị.
3. Ngwaahịa mmepụta ihe nke resin mgbanwe ion na -enwekarị obere polymer dị ala na monomer na -anaghị arụ ọrụ, yana adịghị ọcha dị ka iron, lead na ọla kọpa. Mgbe resin nọ na mmiri, acid, alkali ma ọ bụ ihe ngwọta ndị ọzọ, a ga -ebuga ihe ndị ahụ dị n'elu n'ime ngwọta, na -emetụta ịdị mma nke nsị. Ya mere, a ga -ebu ụzọ mee resin ọhụrụ ahụ tupu eji ya. Na mkpokọta, ejiri mmiri gbasaa resin ahụ nke ọma, mgbe ahụ, enwere ike wepu adịghị ọcha ahụ (ọkachasị ogige igwe) site na 4-5% tụgharịa hydrochloric acid, enwere ike wepu nsị organic site na 2-4% dilute sodium hydroxide solution. Ọ bụrụ na ejiri ya na nkwadebe ọgwụ, a ga -etinye ya na ethanol.
Nke gara aga: Resin mgbanwe cation acid adịghị ike
Osote: Ngwakọta resin agwakọta